Siyaasi xaaskiisii dilay isla markaasna telefishinka ka qirtay - BBC News Somali
Siyaasi xaaskiisii dilay isla markaasna telefishinka ka qirtay
30 Maajo 2019
Lahaanshaha sawirka IRIB News
"Waxay u fekeri jirtay qaabkay doonto, arrintaas ayaana nolosheedii galaaftay"
Sidaasi waa sida uu Mohammad Ali Najafi, oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee Iran iyo duqii hore ee magaalada Tehran, ku sharraxay sababtii uu u toogtay xaaskiisii labaad.
Waxa uu doonayey in uu furo - dalabkaas oo ay ka diidday. dabadeed waxa uu ku dhuftay shan xabbadood, mid kamid ah xabbadahaas ayaa wadnaha ka haleeshay, sida ay booliisku sheegeen.
Booliiska ayuu isu dhiibay, inkastoo uu markii hore iskudayey in uu baxsado, kaamarooyinka booliiska ayaa qabtay oo ka duubay muuqaallo lagu qoslo.
Sida loo qaabilay se ma ahan wax aad malayn karayso.
Wax loo ekaysiiyey war deg deg ah
Xuquuqda Sawirka @ksadjadpour @ksadjadpour
Telefishinka dawladda Iran ayaa muuqaal ka duubay Mr Najafi oo dhex lugaynaya saldhigga booliiska waxaana dhacdada oo dhan loo ekaysiiyey war hadda soo dhacay oo kale, arrintaas oo dhalisay dood aad u wayn oo ku saabsan nooca ay tahay cadaaladda ka jirta dalka Iran.
Boliiska ayaa ninkaas ula dhaqmay si xushmadi ku jirto, ayagoo salaan u saaray ninkaas dilka lagu tuhunsan yahay.
Ninkaas ayaa markii dambe muuqaal laga soo duubay, asagoo la sheekaysanaya saraakiisha, oo cabbaya shaah kulul, markaas oo wariyuhu uu kiiska faahfaahinayey.
Xuquuqda Sawirka @mehrnews_fa @mehrnews_fa
Is maan dhaaf
Najafi ayaa loola dhaqmay si xushmad wayni ku jirto, arrintaas oo dadka baraha bulshada adeegsada ay si wayn uga horyimaadeen, marka la eego sida ninkan loola dhaqmay iyo sida loola dhaqmo dadka caadiga ah ee dambiyada yar yar gala - sida qofka Ramadaanta afura ama gabadha aan hijaabka xidhan.
Waxa uuba ku sigtay in uu qirto in uu xaaskiisa dilay.
Dagganaanta ka muuqatay Mr Najafi ayaa dood wayn dhalisay - mid ka mid ah dadka Twitter-ka adeegsada ayaa bartiisa ku sheegay in qaabkii Najafi uu u galayey saldhigga booliiska uu soo xasuusiyey filimkii Se7en iyo qaabkii uu Spacey ugu dhex lugeeyey saldhigga booliiska asagoo korkiisu wada dhiig yahay.
Xuquuqda Sawirka @AhmadrezaKzmi @AhmadrezaKzmi
Balse dad badan ayaa is waydiinaya sababta muuqaalka looga duubay Najafi oo ku dhex jira saldhigga booliiska?
Jawaabtu waxay u ektahay mid siyaasadeed.
Ninkan siyaasiga ah ee isbaddal doonka ah ayaa ahaa nin ay aad isugu dhow yihiin madaxweyne Rouhani, ilaa lagu khasbay in uu iska casilo xilkii maayarka kaddib markii qolyaha mayalka adag ay ku eedeeyeen in uu ka qayb galay munaasabad lagu xusayey Maalinta Caalamigga ah ee Haweenka, halkaas oo hablo da'yari ay qoob ka ciyaar kusoo bandhigeen - arrintaan oo aan ahayn dhaqan Islaami ah.
Ka isbaddal doon ahaan, Najafi ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa siyaasiyiinta mayalka adag ee Iran, kuwaas oo Xidhiidh adag la leh warbaahinta dawladda ee IRIB.
Balse Su'aashu waxay tahay muxuu xaaskiisa u dilay?
Godadlaynta iyo furriinka
"Waxaan doonayey in aan cabsi galiyo, waxaan u sheegay in aan furayo, balse way diidday. qalad baan sameeyey," sidaas ayuu Najafi u sheegay masuuliyiinta garsoorka.
Mitra Ostad, oo 35 jir ahayd, ayaa ahayd afada labaad ee ninkaas 67 jirka ah, kaas oo soo qabtay jagooyin wasiirnimo oo kala duwan.
In xaasas badan la guursado ayaa sharci ka ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, balse guurkii labaad ee ninkaan ayaa fadeexad ku noqday kadib markii ay dhaliileen qolyaha isbaddal doonka ahi. inkastoo godadlayntu ay caadi ka tahay meelaha miyiga ah, balse waxay aad ugu yar tahay magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan dabaqadda waxbaratay.
Iscasilaadda Najafi uu iska casilay maayarka magaalada Tehran toddobo bilood kahor ayaa sidoo kale la xidhiidhay dhaliilo noocaas oo kale ah oo loo jeediyey.
Marka la ogaaday
Maydka Mrs Ostad ayaa laga helay dabaqa toddobaad ee guri kuyaal Waqooyiga magaalada Tehran, waxaana ka qaylo keenay wiil 13 jir ah oo ay xaas kale u dhashay.
Najafi ayaa sheegaya in Ostad ay ugu hanjabtay in ay burburinayso haddii uu ka tago, ama haddii uu xidhiidh dhow la yeesho minwayntiisa ama qoykiisa kale.
Muuqaallada Najafi ee laga duubay intii uu ku sugnaa saldhigga booliiska ayaa waxaa xigay muuqaal kale oo laga duubay asagoo qiranaya oo ay baahisay warbaahinta IRIB, taas oo uu ku qirtay in uu afadiisii dilay.
Xuquuqda Sawirka @Entekhab_News @Entekhab_News
"Maahan wax la qaadan karo in qof aan maxkamad lasoo taagin laga waraysto warbaahinta oo markaas uu dambigii qirto!" ayuu qoray Moein Khazael oo ka mid ah dadka adeegsada Twitter-ka.
Muuqaal laga duubay, ayuu Mr Najafi waxa uu ku sheegay in khilaafka u dhexeeyey asaga iyo xaaskiisii Ostad uu gaaray heer aan waxba laga qaban karin.
"Xanaaqii ayaa iga batay, waxaan lasoo baxay bastooladdii ayaduna waxay aadday suuliga. Waxaan uga daba tagay suuliga. waxaan doonayey in aan cabsi galiyo. waxaan tusay bastooladdii oo waxaan ku idhi: hadalka ma joojinaysaa? way ka dhaga adayg tagtay, wayna ikala tuurta, wayna igu soo boodday bastoolladdana ammaanka ayaa u furnaa".
Waxa uu sheegay in uu usoo jeediyey furriin saaxiibtinimo balse ay diidday. waxa uu usoo bandhigay in uu siiyo dahab gaaraya 1362 - oo ay ku heshiiyeen in uu siiyo guurkeeda kadib - si ay mar uun u dhaafto.
ugu dambayntii waxa uu sheegay in waxa malgay uu ahaa dhaga adaygeeda.